Abaalmarinta News Spring # 6 - Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Maya. 6 Spring 2018
Ku soo dhowoow daabacaadda 6 ee Spring edition ee abaalmarinta. Waxaan haynaa sheekooyin badan iyo warka kugu saabsan. Si joogto ah ula soco nuucdayada caadiga ah ee Twitter iyo bogagga todobaadlaha ah ee bogga guriga sidoo kale.
Sawirkaan oo ah ubaxa quruxda badan ee jiirarka ee ugu sareeya ayaa lagu qaaday Washington DC kaliya kadib Shirwayn Caalami ah oo aan ka qeybgalay horraantii Abriil. Waxaa la yaab leh, waxaan kaliya ku helney ubax halkan ku yaalaan Edinburgh maalmo yar ka hor.
Nidaamka Badbaadinta Macluumaadka Guud
Dhakhaatiirtu waxay xaqiijinayaan waxa aan ka shakisanahay
Shirka Caalamiga ah ee 5th ee Ku-Xeeldinta Habdhaqanka
Isbahaysiga Ku Saabsan Shirarka Waxyeelaynta Galmada, Washington DC
Digniinta Porn - "Bandhig Faneed" Gaara
Gray Cells iyo Cells xabadka
Facebook iyo Youtube
Cudurka galmada ee loo yaqaan 'Sexual Addiction-vs-Porn Addiction', sida ay ku qoran yihiin BBC
Caddaynta Da'da ee UK
Sagootin Murugo leh
XAALADDA DIB U DHASHAY
Shaki kuma jiri doono inaad ka heshay waraaqo ka socota ururo badan oo aad la xiriirto adigoo codsanaya inaad doorato diiwaankooda. Waa hagaag, haddaad rabto in aad dhageysiga ka samayso Reward Foundation waxaad u baahan doontaa inaad ka jawaabto codsiga aad naga heli doonto maalmaha soo socda. Waxaan rajeyneynaa inaad adigu dooneyso!
Waxaannu soo saarnay taxadarka koowaad ee ka mid ah afarda kulliyad ee Royal College of General Practitioners, oo loo yaqaan 'accredited,' maalinlaha ah oo ku saabsan saamaynta sawir-gacmeedka internetka oo ku saabsan caafimaadka maskaxda iyo jidheed ee Isbuucaan ee Edinburgh. Saddexda soo socota ayaa ka dhici doona London, Manchester iyo Birmingham maalmaha soo socda. Illaa iyo hadda, GP-yada xaadiraya ayaa xaqiijiyay waxa aan ka shakisan nahay - inay arkeen koror aad u badan oo ku saabsan tirada bukaanka ragga ah ee ragga ah ee soo bandhigaya cilladaha galmada sida 'dheecaan soo daahid' (badanaa horudhac u ah cillad aan caadi ahayn), anorgasmia (awood la'aan kacsiga) iyo cillad kacsi lafteeda.
Tani waxay dhacday kaliya dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxayna kudhacmeysaa helitaanka baahsan ee bilaashka ah, jilicsan ee jilicsan ee casriga ah iyo kiniinnada. Waxaa jiri kara arrimo kale oo wax ku ool ah, laakiin lacagkeena loogu talagalay dembiilaha ugu muhiimsani waxay ku saabsantahay saameynta laydhka internetka oo lacag la'aan ah.
Dhakhaatiirta ayaa sidoo kale ka warqabaya in Viagra iyo daawooyinka kor loo qaadayo ee kor loo qaado, aysan si fiican u shaqeynin xaalado badan si loo yareeyo arinta. Sababta aanay u shaqeynin waa in dhibaatadu tahay "aan ka hooseeyn suunka", sida dhiigga socodka ugu muhiimsan ee xubnaha labka ah, laakiin waxa uu ka duwan yahay khalkhalka dareenka maskaxda "mooska". Haddii aanad arag Gary Wilson's funny iyo wargalinta TEDx hadalka "Tijaabada 'Porn Tacliinta weyn" on this, arag halkan.
Waxa ay xirfadlayaashu ka baranayaan cilmi-baaris weligeed sii kordhaya, si ay uga yaabaan, waa taas porn-sababto Qalitaanka erectile waa 'wax', oo ka duwana arimaha laxiriirta erectile oo la xidhiidha ragga waaweyn. Tani article sharaxaa faraqa. Halkan sidoo kale waa a bandhig ku salaysan taariikhda ED oo leh taageero badan oo cilmi ah.
Fadlan isku-xaadir istaraatiijiyadayada hadhay haddii aad heli karto ogeysiis gaaban ama u sheeg shaqaalaha asxaabtaada. Waxaan noqon doonaa xayaysiisyo taariikhda mustaqbalka dhow ee dhammaadka 2018.
Guddoomiyahayaga Mary Sharpe ayaa lagu martiqaaday madaxweynaha Lucy Cavendish College, Cambridge, Jackie Ashley (sidoo kale a Guardian qoraaga iyo xaaskiisa siyaasiga ah ee Andrew Marr) si ay uga hadlaan saameynta sawir-maskaxeedka internetka ee maskaxda dhalinyarada Khamiista 7th Juun 2018. Eeg halkan wixii faahfaahin dheeraad ah. Waa dhacdo bilaash ah. Kaalay haddii aad awooddo.
5th Shirka Caalamiga ah ee Ku-Dalladaynta Dabeecadda
Hay'adda Abaalmarinta Reward ayaa ku faraxsaneyd inay sameyso kulankiisii ​​ugu horeeyay Shirarka ICBA oo ka dhacaya magaalada Cologne, Jarmalka 23-25 ​​Abriil. ICBA waxay u keentaa aqoonyahannada neerfaha iyo cilmu-nafsiyeedka adduunka oo idil inay soo bandhigaan cilmi-baaristii ugu dambeysay ee ku saabsan qabatinka akhlaaqda. Dhacdooyinka TED ayaa qalbigaaga cuna! Tani waa meesha laga rabo in laga helo tallaabada dhabta ah ee dhabta ah. Professor Stark wuxuu bixiyay hadal muhiim ah oo soo koobaya guud ahaan cilmiga sayniska ee saameynta isticmaalka filimada. Waxay ahayd masterclass run ah.
Darryl Mead wuxuu soo bandhigay shaqada hay'ad samafal ah oo ku saabsan isgaadhsiinta dadweynaha ee saameynta xun ee internetka ee jinsiyada internetka maanta. Waxa uu ka hadlay qorshaha casharka ee ku saleysan caddaynta ee iskuulada, aqoon-isweydaarsiyo xirfadleyaal caafimaad, qareeno, shaqaale dawladeed iyo macallimiin iyo samaynta shaqada saynisyahanno la gaari karo kuwa u baahan. Tani waxaa ka mid ah dib u eegista waraaqaha sayniska ee ku saabsan galmada internetka ee shirkii ICBA ee sanadkii hore ee dalka Israa'iil.
Haddii aad xiiseyneysid warqadan ka-dib-loo-eegay, waxaan ku siin karnaa xiriirin kuu oggolaanaya inaad ka soo qaadato waraaqda daabacaadda. Heshiiska daabacadu wuxuu kaliya ogolaanayaa tiro kooban oo ah nuqulo bilaash ah oo la heli karo. Waxaan rajeyneynaa inaan daabacno dib-u-eegid cusub oo ku saleysan waraaqaha shirarka 2018 ee sanadka dambe ee joornaalka Macaamilka Galmoodka iyo Isku Xidhnaanta.
Haddii aad tahay takhtar ama haddii kale aad xiiseyneyso sida loo isticmaalo isticmaalka porno oo dhibaato leh, waxaa laga yaabaa inaad qiimo ku hesho qalab cusub oo loo yaqaan 'Scanner'. Waxay ahayd mid ka mid ah khasnadaha lagu soo bandhigay shirkii ICBA ee sanadkan. Sanadkii la soo dhaafay waxaan ku taliney in muddo dheer, baaritaan faahfaahsan oo lagu magacaabo Isticmaalidda Pornography Sababaha oo leh 18 su'aalood, laakiin qalabkan cusub wuxuu leeyahay shan keliya. Ku Naasnuujiye kooban waxay u egtahay in ay muhiim u tahay bixinta adeega guud ee loo yaqaan "General Practitioners" qalab kaas oo dhakhso ah loogu isticmaali karo ballanqaadka caadiga ah ee NHS.
Waan ku faraxsanahay in aan awoodno in aan ka qaybqaato arrintan cajiibka ah Shirarka Caalamiga ah iyada oo ay ka badan yihiin dhaqdhaqaaqayaasha 600 iyo aqoonyahanno ka yimid hay'adaha muhiimka ah ee caalamka. Wadahadal ayaa lagu soo bandhigay bogga Facebook waxaana wali laga heli karaa internetka. Waxaad maqli kartaa Professor Gail Dines, aasaasaha Dhaqanka Wanaagsan *, sharax farqigainta u dhaxaysa feminismaha xagjirka ah iyo feminismka xoriyatul qowrka, oo horey u ahaan jiray liddi kufsiga, oo ah kan ugu dambeeya ee loo yaqaan porno.
Waxaad sidoo kale dhageysan kartaa sheekada wadnaha ee hooyada oo gabdhaheeda 15 ah oo gabadh kale oo gabdhahaan ah 15 u dhashay, oo afduubtay isla markaana xayeysiistay isla maalintaas oo ah 21-sano jir ah oo ku jirta Backpage.com, shaqaale, kuwaas oo intooda badan laga ganacsan jiray. Waxay kufsadeen dhowr rag ah ka hor inta ay afduubayaashu ogaadeen in hooyadeed ay la xiriirtay Boliiska oo ay ku jireen iyaga. Qoyska ayaa ka soo tagay gabal gabal oo ay la socoto gabadh aan waligeed dhibaato ku qabin horaantii oo ay ahayd arday dugsi wanaagsan. Waxay u muuqatay sida Jane Doe (maya 3) filim dokumenti ah oo ku saabsan tahriibinta dadka.
Annaguna mashquul baannu ahayn. Waxaan fududeynay kulan ku saabsan Pornography & Istaraatiijiyadda Caafimaadka Dadweynaha oo ay weheliyaan ku dhowaad 50 kaqeybgalayaasha adduunka oo dhan si ay u eegaan habab kala duwan una wadaagaan fikradaha ku saabsan habka ugu fiican. Waxaan ururinay macluumaad waxtar leh oo aan udhignay warbixin ku saabsan ururka NCOSE guud ahaan. Waxaan sidoo kale siinay warqad muujineysa habab cusub oo ku saabsan digniinta caafimaadka oo la muujin karo ka hor inta uusan qofku daawanin porno, sida digniinta baakadaha sigaarka. Inbadan oo ku saabsan tan shayga soo socda ee hoose.
Ardayda Jaamacadda Edinburgh ee Kulliyadda Fanka waxay soo bandhigeen bandhig gaar ah The Reward Foundation bishii Abriil. Iyada oo qayb ka ah dadaalkeena si aan kor ugu qaadno wacyiga ku saabsan caqabadaha ku habsaday bulshada maanta ee isticmaalka baahsan ee filimada, waxaan la nimid fikradda ah inaan dhigno digniin caafimaad bilowga kalfadhiyada galmada, oo la mid ah digniinta caafimaadka ee baakadaha sigaarka. Si loo horumariyo fikradan, waxaan ku faraxsanahay inaan fursad u helnay inaan la kulanno ardayda naqshadeynta garaafka ee Jaamacadda Edinburgh's College of Art. Hadafkoodu wuxuu ahaa inay abuuraan filim ilbiriqsi 20 ilaa 30 ah oo loo isticmaali karo sidan. Waxay ahayd mashruuc qayb ka ahaa koorsadooda oo ay ugu baxeen si xamaasad leh.
Natiijooyinka waxay ahaayeen neefsashada. Waxay ahayd sharaf aad u weyn in lagu martiqaado inay ku fariisato filimkayaga gaarka ah ee fanka oo leh bandhigyo 12 oo ka yimid ardaydan aadka u wanaagsan. Kala duwanaanshaha iyo saameynta ayaa ahaa mid aad u weyn. Waan ku faraxsannahay inaanu lixdaas ka muujinno in ka badan ergooyinka 200 ee shirweynaha caafimaadka dadweynaha ee ka faa'iidaysiga jinsiga ee Washington halkaas oo si diirran loogu soo dhaweeyay. Qaar ka mid ah siyaasad dejiyeyaasha iyo siyaasiyiinta joogtada ah waxay doonayaan inay raacaan shaqadan.
Mary Sharpe ayaa ku soo laabatay Nolan Live at BBC Northern Ireland on 7th March 2018. Xiriiriyaha wuxuu ku geeyn doonaa fiidiyow buuxa oo qeybtaan ka mid ah bandhigga. Maryan waxay ka doodday saameynta sawir-gacmeedka ee maskaxda iyo jir ahaaneed ee carruurta ee martida loo yahay Stephen Nolan, oo leh dhaqdhaqaaqe u ololeeya ladagaalanka iyo ladagaalanka galmada
Sida ku xusan joornaal hore, sannadkii hore shirkadeena Mary Sharpe waxaa loo magacaabay iskaashatada CYCJ oo fadhigeedu yahay Jaamacadda Strathclyde ee Glasgow. Waxay ku faraxsantahay in ay bixiso hadalkeeda gabdhaha ee "Saamaynta Pornography Internetka ee Maskaxda Dhallinyarada" shirkii sanadlaha ah ee mawduuca Gray Cells iyo Cells xabadka. Tani waxay dhacdey isla maalintaas oo ay dhacdadii TV-ga Nolan Live ku leedahay Belfast.
Sawirada laga soo qaaday bandhigyada oo dhan ayaa la heli karaa halkan iyo hadalka Maryan wuxuu ka bilaabanayaa P.85-dhamaadka. Waxay ahayd fursad aad u wanaagsan in lala kulmo oo fikradaha lala wadaago cilmi-baarayaasha kale iyo xirfadleyda kuwaas oo si qoto dheer ugu lug leh barashada caddaaladda dambiyada ee Scotland maanta.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno boggeena cusub ee Facebook oo diiradda saaraya aqoon isweydaarsiyada aan bareyno iyo dhacdooyinka kale ee aan ka helno. Xor noogu xiriir annaga halkan.
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa xulashada yar yar ee fiidiyooga ah ee aan hadda ku hayno cusub YouTube channel. Waxaa jira fiidiyowyo badan oo fara badan oo yimaada maxaa yeelay hadda waxaan leenahay qorshe loogu talagalay wixi wareysiyada badan ee aan ku duubnay adduunka oo dhan khabiiro.
Isbuucii hore xidhiidhka samafalka Xiriir oo loogu yeeray NHS-ta in ay wax badan qabato si ay uga caawiso culayska dadka doonaya caawimo "jinsiga galmada". Waxay ku niyad-jabtay inay aragto warbixinta BBC-da iyo warbaahinta kale ee diiradda saaraya 'jinsiga takoorka' sida, waa dabeecad adag oo ku wajahan dadka kale, halkii ay ka noqon lahaayeen daawashada jilicsanaanta jilicsan iyo niyadjabinta. Ilaa intay fududahay in si sahlan loo helo porno hardcore ayaa la heli karaa oo bilaash ah oo la heli karo iyada oo loo marayo broadband qaar ka mid ah 10 sano ka hor, isticmaalka sigaarka dhibaato xun ayaa ahaa mid aad u yar waxaana loo qoondeeyey tababarka daaweynta jinsiga 'jinsiga galmada'.
Si kastaba ha noqotee isku darka maandooriyaha galmada iyo balwadda maandooriyaha maanta ma ahan mid ku habboon, ugu yaraan maaddaama kuwa badan oo daroogada jilicsan maanta ay yihiin bikro. Sidoo kale waa jahwareer ay si aad ah uga faa'iideystaan ​​aqoonyahannada cilmiga jinsiga. Waxay doortaan inay iska indhatiraan sayniska sii kordhaya waxayna ku adkeysanayaan sababo siyaasadeed oo ah inaysan jirin wax la mid ah galmada ama balwadda. Waxayse u weeciyaan diirada warbaahinta si ay uga hadlaan dadka caanka ah sida Harvey Weinstein ama Tiger Woods ayagoo dhahaya waa uun taajir taajirnimo dhaqan xumo. Hase yeeshe, way caddayd ugu yaraan waraaqaha cilmi-baarista ee 3 ee shirkii ICBA in dadka intiisa badan ee qaba cilladda galmada ee qasabka ah ay dhibaato ka haysato isticmaalka qasabka ah ee galmada, halkii ay aadi lahaayeen shaqaalaha galmada ama wixii la mid ah.
A isku raacsan ee culimada ugu sareeya ee Lancet taageer qaybta cusub ee baaritaanka ee '', oo ay ku jiri doonaan qabatinka galmada iyo balwadda galmada, si loogu daro Ururka Caafimaadka Adduunka ee dhowaan-la-daabacayo Qeybinta Cudurrada Caalamiga daabacaadda 11th. Marka taas la daabaco, jahwareerkan ula kaca ah waa laga soo saari doonaa.
Waxay u taagan tahay in la helo suurtagalnimada helitaanka diyaar garow aad u sareeya oo xawaare ah oo gacanta ku jirta gacanta u horseedaya in si fudud loo isticmaalo isticmaalka qasabka ah marka loo eego raadsashada lamaanayaasha nolosha dhabta ah kadibna isku dayaya in ay la galaan iyaga jinsiga. Waxaan sameyneynaa sida ugu fiican ee aan ugu caawino suxufiyiinta saxafiyiinta ah.
Sharcigan cusub ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo dhamaadka sanadkaan. Qoraal blog ah oo aad u cad oo saaxiibtinimo leh John Carr waxay u sheegeysaa sheekada sababta ay tani u tahay horumar muhiim ah oo horumar leh oo loogu talagalay carruurta ku nool UK.
Maaddaama ay tahay hay'ad samafal ah oo jecel cilaaqaadka asaasiga ah ee aan wax ku barno, waxaan u maleyneynaa inay xaq u leedahay inay ka hadashaan Kenneth John iyo Doris Ivy Mead, waalidiinta Reward Foundation's co-founder, Darryl Mead. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku biiray Australia si aan u dabaaldego sannad-guuradii guuradii 74th ee 19 Febraayo sannadkan. Seddex todobaad ka dib, Ken ayaa seexday markuu hurdada ka da 'daayey sanadka 94. Dot, 93, haweeney ku noolayd Ken, ayaa si dagan u seexday hurdada Khamiistii la soo dhaafay, 8 toddobaadyo ilaa maalinta ka dambeysa markii ay jeclayd. Waxay inoo sheegtay inaysan noolaan karin isaga la'aantiis.
Waxay ahayd mudnaan ay ku ogtahay labadoodaba, iyagoo arkaya daryeel iyo naxariis leh oo ficil ah, laakiin sidoo kale waxay ku raaxeeysanayaan firfircoonkooda, marwalba taageeraya, shirkad. Waxaan ka maqnaan doonaa indho-indheynta muuqaalka ee Ken-ka iyo soo-jeedinta sheekada, iyo Dot ee sharaf iyo xasilooni leh.
Markii aan weydiistay Dot maalinta arooska ee Darryl in 2012, maxay ahayd qarsoodi ah guur farxad dheer, ayay ku jawaabtay, "Marna doodi. Ma jirto wax qiimo leh oo ku saabsan arinta ". Waxaan ku faraxsanahay inaan ku gudbiyo ereyada xigmadda ee ka soo jeeda hooyo qaan-gaadhka ah oo jecel kan aad u jecel oo aad loo jeclaaday. Wax badan kama helin tan.
Waxaad awoodi kartaa cusbooneysii doorbidkaaga or ka joojin liistadan.